Wasiirka hore Nigeria Fani-Kayode oo ku eedeeyey in Illuminati ay Sameeyeen faysriska COVID-19: – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka Wasiirka hore Nigeria Fani-Kayode oo ku eedeeyey in Illuminati ay Sameeyeen...
Wasiirka hore Nigeria Fani-Kayode oo ku eedeeyey in Illuminati ay Sameeyeen faysriska COVID-19:
Femi Fani-Kayode, oo hore u ahaan jiray Wasiirka Duulista iyo madaxa xisbiga Dimuqraadiga, PDP, ayaa la yimid sheegasho cusub oo ku saabsan CVID-19 cudurka ku habsaday adduunka oo dhan.
Sida laga soo xigtay Fani-Kayode, fayraska cabsida leh waxaa abuuray shirkadda ‘Illuminati’ oo ujeeddadeedu tahay kaliya yareynta dadka adduunka.
Ereyga “Illuminati” waxaa loola jeedaa Bavaria Illuminati, oo ah bulsho qarsoodi ah.
Bulshadan qarsoodiga ah, oo uu aasaasay borofisar sharci yaqaan ah oo reer Jarmal ah, Adam Weishaupt, wuxuu shaqeeyey toban sano oo keliya, laga bilaabo 1776 ilaa 1785.
The Illuminati waxay ahaan jireen koox runtii dhab ah. In kasta oo bulshada loo sheegayo inaysan sii ahaan doonin jiritaanka, haddana dad badan ayaa wali aaminsan waxa ay aaminsan yihiin inuu jiro ururkan.
Coronavirus wuxuu ka bilaabmay magaalada Wuhan ee Shiinaha sidii 2019 kaftan laakiin hadda wuxuu ugu faafay sidii dab ballaadhan oo kale ah, ku dhowaad dhammaan waddammada adduunka oo kumanaan dhimasho ah sababey
hadii aan eegno maanta inta uu diley iyo inta ka bogsatey waa sida tan. Tirada dhimada coronavaris Aduunka oo dhan maanta wuxuu mareyaaa 3/22/2020, waxaa u dhintey 13069qof, waxaa ka bogsadey 95829qof, waxaanuu ku dhacey aduunka oo dhan 308564qof
Sidaan kaga soo xiganey skynewsarabia
Isagoo qoraal ku qoraya barta Twitter-ka habeenimadii Sabtida, amiirkii PDP wuxuu sheegay in ujeedka laga leeyahay ay tahay in la abuuro argagax iyo cabsi, in la siiyo Gobolka awood dheeraad ah oo ay ku maamusho dadka iyo marka seddexaad, oo ay u soo bandhigaan waxa uu ku tilmaamay “halgamaagii” ka hortagga Covid “taasoo horseedi doonta dhimashada malaayiin.
Sida uu sheegay wasiirkii hore, “Ujeedada 1aad waa in la abuuro argagax iyo cabsi. Tan 2-aad ayaa ah inay gobolka siiso awood dheeri ah oo ay kugu maamusho magaca kaa difaacaya Covid 19.
“Saddexaad waa in la keeno barnaamij lagu durayo tiro khasab ah ee ka-hortagga Covid-ka kaas oo horseedi doona dhimashada malaayiin.
Waxay rabaan inay xukumaan aadanaha isla markaana ay burburiyaan bulshada adduunka. irbadda iyo dawada ay u soo bandhigi doonaan la dagaalka, ka hortagga iyo daaweynta Covid 19 waxay dili doonaan dad ka badan inta uu diley Covid 19 laftigeedu.
“Illuminati wey ka shaqeeyaan halkan oo uu uga jeeda Nigeria . Waxaa lagu magacaabaa lahjada Hegelian(Hegelian dialectic): dhibaatada, falcelinta, xalka. ”
Covid19 maanta intii laga helay somaliland